के हो वान बेल्ट वान रोड अवधारणा ? - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
केन्द्रको विवाद गाउँसम्म पुग्दै, देउवा पौडेल समुह बैचारिक भिडन्तमा
सरकारको समिक्षामा मन्त्री फर्नेसम्म छलफल हुने
केपी ओली सरकारलाई ‘अलोकप्रिय’ बनाउने पाँच मुद्दा
कञ्चनपुर र अछाममा स्मार्ट कार्ड वितरण हुने
के हो वान बेल्ट वान रोड अवधारणा ?
शनिबार, बैशाख ३०, २०७४
चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)को अवधारणामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । शुक्रबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले अवधारणाको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे । आइतबारदेखि चीनमा सुरु हुने ओबिओआर सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा नेपालले सो बृहत् परियोजनामा सहभागी हुने गरी हस्ताक्षर गरेको हो ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत उपस्थित थिए । यससँगै एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ६० मुलुक जोडिने चीनको महत्वाकांक्षी योजनामा नेपाल पनि सहभागी हुने पक्का भएको छ । अवधारणाले सहभागी मुलुकहरूबीच सडक र समुद्री मार्गको सञ्जाल विस्तारलाई केन्द्रमा राखेको छ । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षरपछि नेपालको अन्तरदेशीय रेल तथा सडक सञ्जाल विस्तारमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
दुई देशबीच भएको समझदारी नेपाल–चीन सम्बन्धमा महत्वपूर्ण पाइला भएको मन्त्री डा. महतले बताए । उनले भने, ‘यो सम्झौताले नेपाल र चीनबीच सडक सञ्जालले जोड्ने र यसका माध्यमबाट नेपालमा चिनियाँ लगानी आई नेपालको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने अपेक्षा मैले गरेको छु ।’ नेपालका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण रहेकोसमेत डा. महतले बताए । ‘भूपरिवेष्टित देश नेपाल अझै पनि अल्पविकसित अवस्थामा नै छ, यसलाई ध्यानमा राखेर चीनजस्तो महत्वपूर्ण छिमेकीबाट नेपालमा लगानी हुनेछ र नेपालको आर्थिक विकासमा महतवपूर्ण टेवा पुग्नेछ,’ उनले भने । समझदारी नेपालमा विदेशी लगानी र व्यापार प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा कोसेढुंगा भएको पनि उनले बताए । ‘नेपाललाई बढीभन्दा बढी लगानीको खाँचो छ, यसै नयाँ आयोजनामार्फत नेपालमा चिनियाँ लगानी होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ,’ उनले भने । समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने चरणसम्म आइपुग्न दुवै देशका विभिन्न चरणमा छलफल र अन्तरक्रिया भएको बताए । सो कार्यक्रममा परराष्ट्रसचिव बैरागीले नेपालले पनि चीनको यो महत्वपूर्ण आयोजनाबाट लाभान्वित हुने भन्दै यसलाई नेपालको विकास प्रयासको एक महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले यस आयोजनाबाट चीन–नेपाल सहयोग र विशेषगरी दक्षिणी एसियाली क्षेत्रकै आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने धारणा राखिन् । नेपालले ओबिओआर अवधारणामा सहभागी हुने सैद्धान्तिक प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा सन् २०१४ डिसेम्बरमा चीनसँग हस्ताक्षर गरेको थियो । यसबीचमा ओबिओआरमा नेपालको सहभागिताका विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल तथा वार्ता भएका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने मौखिक सहमति गरेका थिए ।
महरासहित तीन मन्त्री चीन जाँदै
आइतबारदेखि चीनमा सुरु हुने बेल्ट एन्ड रोड फोरम (ओबिओआर मञ्च)मा नेपालका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वको टोली सहभागी हुने भएको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीलगायत सहभागी हुने भएका छन् । सोमबार सम्पन्न हुने सम्मेलनमा २९ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरू सहभागी हुने चिनियाँ मिडियाहरूले उल्लेख गरेका छन् । सम्मेलनको आकर्षण चिनियाँ राष्ट्रपति आफैँ हुनेछन् भने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्तोनियो गुतेरेस, विश्वबैंकका अध्यक्ष जिम योङ किम, आइएमएफकी प्रबन्ध–निर्देशक क्रिस्टिन लागार्दलगायत उपस्थित हुनेछन् । सम्मेलनमा १ सय ३० देशका सरकारी प्रतिनिधिका साथै कुल १ हजार २ सयजना सहभागी हुने जनाइएको छ ।
के हो वान बेल्ट वान रोड ?
चीनले ऐतिहासिक रेसममार्गलाई पुनरुत्थान र विकास गर्ने आफ्नो महत्वाकांक्षी योजनालाई ‘वान बेल्ट वान रोड’का रूपमा अघि बढाइरहेको छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१३ मा युरोप र एसियाका मुलुकसँग चीनको सम्पर्क र साझेदारी विस्तारका लागि ओबिओआरको अवधारणा अघि सारेका थिए । सीले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूसँग सडक रेलमार्फत कनेक्टिभिटी बढाउन ‘सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट’ तथा समुद्र भएका मुलुकहरूसँग ‘म्यारिटाइम सिल्क रोड’ को प्रस्ताव गरेका थिए । यस अवधारणाअन्तर्गत ओबिओआरमा एसिया, युरोप र अफ्रिकाका ६९ मुलुक जोडिनेछन् । यसले विश्वमा चीनको प्रभाव बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । यो परियोजनामा पहिलो चरणमा ८ खर्ब ९० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने अपेक्षा चीनको छ । यस अवधारणामा खर्च गर्न चीनले ४० अर्ब डलरको सिल्क रोड फन्ड स्थापना गरेको छ । त्यस्तै, १ सय अर्ब डलरको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी)ले समेत मुख्य रूपमा ओबिओआर परियोजनामा लगानी गर्नेछ । तर, भारतले ओबिओआरको अवधारणालाई विरोध गरिरहेको छ ।
बाँकी विश्वसँग समाहित हुनु राम्रो
हामी आफैँले सबैतिरको बाटो खोल्न सक्दैनौँ । तर, छिमेकीको प्रयासले हाम्रो कनेक्टिभिटी बाँकी विश्वसँग बढ्न सक्यो भने त्यो असाध्यै राम्रो हो । चीनले इतिहासमा रेसममार्गको माध्यमबाट विश्वका विभिन्न मुलुकसँगको पारवहन र अन्य सम्बन्ध स्थापित गरेको थियो । अहिले वान बेल्ट वान रोड भनेको छ । नेपालले पनि त्यसमा सहभागी भई बाँकी विश्वसँग आफूलाई समाहित गर्नु राम्रो कुरा हो । यो समझदारीपछि सडक, हवाई, रेललगायतका माध्यमबाट नेपालको कनेक्टिभिटी बढाउन सक्यो भने अहिलेको अवस्थाबाट पार पाउन पनि सकिएला ।आजको नयाँ पत्रिकाबाट
213 पटक पढिएको
सांसदद्वारा प्रहरी महानिरिक्षक खनालको राजीनामा माग
काठमाडौं। राष्ट्रियसभा, दिगो विकास तथा सुशासन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदह...